HAWLGAL LAGA SAMEEYAY DEEGAANKA CEELASHA BIYAHA OO HUB IYO RAGBA LAGU SOO QAB QABTAY (DAAWO SAWIRADA) - iftineducation.com
HAWLGAL LAGA SAMEEYAY DEEGAANKA CEELASHA BIYAHA OO HUB IYO RAGBA LAGU SOO QAB QABTAY (DAAWO SAWIRADA)
iftineducation.com – Ciidamada Dowladda Somaliya oo gacan ka helaaya Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ayaa saqdii dhexe ee xalay waxay hawlgal ka sameeyeen deegaanka Ceelasha Biyaha, oo ku yaala wadada xiriirisa Magaalada Muqdisho iyo Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo xiray dhammaan wadooyinka soo gala qaybaha ay ka kooban tahay Ceelasha Biyaha, bilaabayna hawlgal guri guri ah, ayaa waxay iska caabin kala kulmeen rag ku sugnaa mid ka mid ah guryihii ay baaritaanada ka wadeen.
Ciidamada Huwanta, ayaa waxay dileen mid ka mid ah raggaasi, iyagoona gacanta ku dhigay tiro kale. Sidoo kale waxay la wareegeen tiro ka mid ah qoryihii iyo booshadihii ay wateen xubnaha lala xiriirinaayo Ururka Al Shabaab.
Intii uu hawlgalku socday waxaa iska horimaadka lagu dilay mid ka mid ah Ciidamada Dowladda Somaliya, kaasoo sida la sheegay ku dhintay rasaastii ay soo rideen xubnaha loo fishay inay ka tirsan yihiin mintidiinta.
Inkastoo Saraakiisha Ciidamada Dowladdu aanay wax faah faahin ah ka bixin tirada ragga la qabtay, ayaa waxay hadana warar madax banaan xaqiijinayaan in la qabtay shan nin, oo la rumeysan yahay inay Shabaab yihiin.
Telefishinka Aljazeera oo dowlada Masar la tiigsaday maxkamad Caalami ah!
Korea-da Woqooyi Oo Gantaallo Diyaarineysa mareykanka duqeyn kara